२०७८ माघ १३ बिहीबार
प्रतिस्पर्धी नहुँदा र विधान संशोधनले पुनः अध्यक्षमा दोहोरिन ओलीलाई सहज !
काठमाडौं : नेकपा एमालेको दसौँ म’हाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि पुनः नेतृत्वमा दो’होरिन सहज हुने देखिएको छ। पार्टीमा नेतृत्वका लागि ओलीको बलियो प्रतिस्पर्धी नभएको अवस्था र
विधान संशोधनलगायत विषयले उनलाई अध्यक्षमा दो’होरिन सहज हुने भएको हो। नेतृत्वका लागि आकांक्षी देखिएका महासचिव ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङका लागि भने अवस्था असहज हुने देखिएको छ। विधानमा एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने उल्लेख
भएपछि महासचिव पोखरेलका लागि अब उपाध्यक्षबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन भने सुवास नेम्वाङ पनि उपाध्यक्षमै थन्किनुपर्ने अवस्था आएको छ । ६९ वर्ष टेक्न लागेका पोखरेलका लागि पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर दसौँ महाधिवेशन मात्रै हो। तर मंसिरमा महाधिवेशन हुँदा फागुनमा
७० वर्ष पुग्ने ओली आफैंले अध्यक्ष हुने इच्छा व्यक्त गरेमा पोखरेलका लागि अध्यक्ष हुने ढोका बन्द हुनेछ। त्यस्तै पार्टी नेतृत्वका लागि चाहना राखेका नेम्वाङ पनि अध्यक्ष हुनबाट वञ्चित हुने देखिएको छ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल पनि दसौं म’हाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमै थन्किनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। माओवादीबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापाका लागि पनि पार्टीमा अर्को पद छैन ।‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा फेरि एकपटक नेतृत्वका लागि ओलीलाई नै
सहज हुने देखिएको छ। दशौं म’हाधिवेशनमा पनि ओलीले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनेछन् तर फागुनपछि के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गर्ला’, ओली नि’कट एक नेताले भने। केन्द्रीय कमिटीको आइतबारको बैठकमा ओलीले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि सात उपाध्यक्षको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जानकारी दिएका थिए । अहिलेको अवस्था
हेर्दा ७० वर्षे उमेरहद कायम राखेर विधान म’हाधिवेशन हुने भएको छ। वि’धान म’हाधिवेशनअघि तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेरहदलाई कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। -यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
२०७८ आश्विन ११, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 69 Views
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जो भए पनि देश माओवादीकै वरिपरि चलेको छ : प्रचण्ड !
प्रधानमन्त्रीले उ’द्घाटन गरेका अ’वैध टिभीकाे छानबिन सुरु, होला त का’रबाही ?
झण्डा बोक्ने कोही नभएर एमालेले गैंडालाई बोकायो भन्दै खिस्सी गर्छन् माधव नेपाल !
३.	क्रिकेट रंगशाला अलअत्र पारेको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन भन्छ- रकमको दुरुप-योग सोँच्न पनि सक्दैनौँ ।
४.	२ बर्ष अघि अष्ट्रेलिया पुगेर एमपीएल पढिरहेकी २२ वर्षिय सुस्मिता मृ’त अवस्थामा फेला !